Ibhokisi yephepha, Ibhokisi yeZipho, ingxowa yokuthenga-iTai ngaphakathi
Ingcali ngezixhobo zeplastiki
Ixabiso lokubonelela ngokuthe ngqo kumzi-mveliso
Sinexabiso lokukhuphisana lokupakisha. Sineefektri ezi-5 ngokuthe ngqo phantsi kolawulo lwethu, ezivelisa zonke iintlobo zeemveliso zokupakisha, iifektri zethu zihlala kwindawo engangeemitha zesikwere ezingama-60000, ezinemigca e-9 yokuvelisa kunye nabasebenzi abangama-700.
Izixhobo eziphezulu zokupakisha eziphambili
Singenise ngaphezulu kwezixhobo ze-state-of-the-art ezingaphezu kwama-40 zamazwe aphesheya.sisoloko singenisa kwaye siphuhlisa ubuchwephesha obutsha ukugcina iindlela zethu neendlela zethu ziphambili kushishino.
IPhepha leMfundo eliPhezulu eliGqwesileyo lokuPakisha izinto zokuThengisa
Zininzi iingqondi esele zibandakanyekile kwezorhwebo lwangaphandle ngaphezulu kweminyaka eli-10. Sikwanazo neengcali ezijolise kushishino lokupakisha ngaphezulu kweminyaka eli-18.
I-Tai ekupakisheni iphuhliswe kwi-Anxin ye-Shanghai. Siyinkampani yokuprinta kunye nokupakisha enembali yeminyaka engama-30. Ngenxa yokwanda komgca wemveliso, songeze ukupakishwa kukaHenan Lufeng, ukupakishwa kweZhejiang Xinya, ukupakishwa kweZhejiang Dazuo, ukupakishwa kwebhatyi yeJiangsu kunye nezinye iifektri ukwandisa iimveliso zethu, iimveliso zethu eziphambili zibandakanya iibhokisi zeCosmetics, iibhokisi zombala, iibhokisi zerhasi, iibhokisi zeposi, Iibhokisi zesinxibo, iibhokisi zokuhambisa, iincwadana, iibhegi zephepha, iibhokisi zezipho njalo njalo.
Eyona ilungileyo kuwe!
Ngaphaya Lid Baby ...
Iphepha elimhlophe leencola
Iphepha lephepha kwikhawuntara
| --Ibhokisi yokuPakisha
Iipateni Iibhokisi zeZipho zeGable
Yenyuka ibhokisi Carton, Iibhokisi zezipho zezipho, Ibhokisi yeZipho, Isipho sokuKhuthaza, Ingxowa yokukhuthaza, Ibhokisi yeZipho zeLamin,